Amanqaku kaChris Benham Martech Zone |
Amanqaku ngu UChris Benham
UChris uyazi ukuba intengiso enkulu yenziwa ngokumamela abathengi bakho-ungathethi kubo. Usebenzise oku kucinga ukunceda ukuphakamisa iinkampani ezininzi kwizikhundla ezihamba phambili kwintengiso. Ukuqhuba ukuthengisa kwe Alchemer inika uChris ithuba elingenakuthelekiswa nanto lokwenza intengiso efanelekileyo kubathengi ngokusekwe kwingxelo yabo. UChris wajoyina iAlchemer emva kokubamba iindima zokulawula eSymantec, Avast, Webroot, nakwiYellowfin BI. Uphumelele kwiDyunivesithi yaseKansas.
Izifundo ezi-3 ezivela kwiiNkampani zeCustomer-Centric
NgoLwesibini, Agasti 10, 2021 NgoLwesihlanu, Februwari 11, 2022 UChris Benham
Ukuqokelela ingxelo yabathengi linyathelo lokuqala elibonakalayo ekuboneleleni ngamava abathengi afanelekileyo. Kodwa linyathelo lokuqala kuphela. Akukho nto ifezekileyo ngaphandle kokuba ingxelo eqhuba uhlobo oluthile lwesenzo. Rhoqo ingxelo iyaqokelelwa, idityaniswe kwiziko ledatha leempendulo, lihlalutywe ekuhambeni kwexesha, iingxelo ziyenziwa, kwaye ekugqibeleni kwenziwe intetho yokucebisa utshintsho. Ngeli xesha abathengi ababonelele ngengxelo sele begqibile ukuba akukho nto iyenziwayo ngegalelo labo kwaye sele bekwenzile